Matetika ny fofona dia manentana ny fihetsem-po ary mamporisika ny fahatsiarovana alohan'ny hamaritana azy ireo akory. Izy ireo koa dia miteraka fientanam-po mahatsiravina… miaraka amin'ireo olona tratry ny aretina vokatry ny fihenjanana aorian'ny traumatis (PTSD).
Scent Marketing dia karazana marketing sensory kendrena amin'ny fahatsapana olfactory. Ny Scent Marketing dia mampiditra ny maha-izy azy ny orinasa, ny marketing, ny mpihaino kendrena ary mamolavola paikady olfactory izay manamafy ireo soatoavina ireo. Matetika izy io dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fampidirana ny hanitra amina tranombarotra antsinjarany hitaona ny fihetsiky ny mpanjifa.
Izay mitondra antsika amin'ny indostrian'ny varotra fofona. Ireo mpivarotra antsinjarany izao dia mampiasa vola amin'ny rafitra fanaterana fofona manefy ny toe-tsain'ny mpanjifa sy manentana ny fihetsem-po, ny fividianana fividianana ary ny tsy fivadihan'ny mpanjifa. Araka ny lahatsoratra Shopify iray, ny varotra fofona dia nitombo ho lasa orinasa amina miliara dolara izay mandroso indostrialy maro.